Abantu abaningi bakwamanye amazwe eza eRussia nomholo, umsebenzi ohlelekile futhi lisaphila isimo nge ukubhalisa yokuhlala unomphela nezihlobo nabangane. It is baphokophelele ukuze uthathe leso sinyathelo, njengoba umthetho, isimo esinzima kwezomnotho ezweni labo.
Kodwa ukuze kube eRussia ngokugcwele, bamazwe angaphandle ziyadingeka zidlule izinqubo eziningana for semthethweni, enye yazo imvume zesikhashana, kafushane RVP. Ulwazi mayelana imvume zesikhashana kuyoba ezithakazelisayo kulabo uyazibuza kanjani ukuthola yisakhamuzi. RVP - esinye sezinyathelo sokubhalisa izakhamuzi WaseRussia.
Lowo Mbhalo wangonyaka we ikuvumela ukuba uhlale e-Russia isikhathi eside bese uthola imvume yokuba yisakhamuzi. A yokuhlala imvume yesikhashana - isitembu ekhethekile ukuthi ungubani umuntu owavela elinye izwe (isibonelo isitembu ngezansi). Personality ngaphandle yisakhamuzi (lizwe ababhekwa njengezakhamuzi zalo), inqubo RVP njengoba insimbi ehlukile ifomu ekhethekile.
Isitembu RWP liqukethe ulwazi ukuthi isakhamuzi esithile wamanye amazwe (kuboniswe ngegama) anikezwe zesikhashana ensimini ka WaseRussia (isikhathi esingakanani, ubani ngalokho usuku,). Futhi, usuku kanye nendawo umuntu azalelwa alien, ubulili kanye nobuzwe.
Ubuqiniso ETA sekuyiminyaka emithathu. Phakathi nale nkathi, abafokazi kumelwe anqume ukuthi ufuna ukuhlala kuleli zwe, bese ukusebenzisa lesi sikhalazo ku esinikezwe imvume yokuba yisakhamuzi noma ubuzwe. Ngesisekelo umthetho Russian anelungelo lokuthola RWP isigaba oluthile lwabantu, okubandakanya abantu abavela kwamanye amazwe, njenge abahlala eRussia nakwamanye amazwe. Sicelosikhalo bangafaka izingane futhi ehlatshwa ngaphakathi the bombo of abameleli zomthetho noma abalondolozi.
Ngingabakha kanjani ubuhlobo RVP? amaphepha adingekayo, izindleko yokubhalisa, izinsuku kanye neminye imininingwane Kuzoxoxwa.
Franchise yokubhalisa RVP
ETA unikeza omningi ezicini ezinhle ngoba abafokazi, ezinye zazo yilezi:
ilungelo lokuhlala kanye umsebenzi endaweni WaseRussia isikhathi esiyiminyaka emithathu ngaphandle kokuqeda imibhalo eyengeziwe (ngemuva kwalokhu ozobizwa kudingeka esinikezwe imvume yokuba yisakhamuzi);
owezizweni unelungelo lihlale ngokomthetho eRussia izinyanga ezintathu kusukela ngosuku okwaqala ngalo izwe, kuyilapho ikhadi elivumelekile kufuduka (ifomu le dokhumenti esithombeni ngezansi);
Inikeza ilungelo umsebenzi ngaphandle kwemvume umsebenzi kokubili inkontileka kanye inkontileka;
owezizweni unelungelo ukuba bazuze zokwelashwa khulula futhi kungaba khona zezempilo zikahulumeni emphakathini;
owezizweni unelungelo ukukhipha i-VAT, njengoba idokhumenti kuyadingeka ezimweni eziningi;
Isisebenzi kungaba ukuqhuba ibhizinisi;
ukuthuthela Russia umfokazi othole ETA, siyonika amaningi-entry visa iminyaka emithathu, okuzokwenza umngcele isimo njengoba izikhathi eziningi njengoba ufuna.
Rah inikeza amalungelo amaningi abafokazi, kodwa namanje ezinye ukulinganiselwa, ezinye zazo yilezi:
kulelo cala, uma alien engahlali endaweni kwamandla isikhathi eside kunaleso izinyanga eziyisithupha, angase alahlekelwe RVP, njengoba kusho yokuhlala unomphela eRussia;
ngowesinye isizwe kungenzeka kuphela le ndaba, lapho wanikwa imvume yokusebenza;
uma ukulahlekelwa ilungelo nginqabe RWP noma kabusha wokufaka kungenziwa kuphela emva konyaka;
ngowesinye isizwe unelungelo ukuvakashela nezinye izinhlangano isiRashiya, ngaphandle ezweni, abekho domain yomphakathi (idolobha avaliwe, izinto amasu);
esingenalungelo lokuyeka ukubamba iqhaza enqubeni lokhetho.
Isabelo imvume zesikhashana
Njengoba RVP zokwazi eRussia, nanso is ncele? ETA ukhishelwe quota ezabekwa ngendlela ngokomthetho. I-quota ovumelekile ngonyaka ikhalenda olandelayo isihloko Russia ngamunye. Isibalo quota kuxhomeke endleleni kunabantu abaningi bezinye izizwe bengahlala futhi siqasha isifunda esihlukile. Ekupheleni isicelo quota yokubhaliswa ETA awamukelekile.
Amaphepha adingekayo ukuze RWP ku-quota
Njengoba RVP bangene Russia? Isakhamuzi angaphandle kudingekile ukulungisa iphepha, ehlanganisa uhlu:
inombolo Standard isithombe izingcezu ezimbili;
yangaphakathi ID kanye passport;
idokhumenti kwasayinwa mayelana ukungabi khona izinkinga nomthetho futhi komthetho;
ulwazi lwezokwelapha mayelana ukungabi zezifo ezithathelwanayo namakhambi ezithathelwana ngobulili, ulwazi wezifo zengqondo;
Ephepheni ubunikazi ulimi isimo ezingeni okwanele;
Irisidi zombuso komsebenzi yokukhokha.
Isicelo kufanele iqukathe idatha yomuntu siqu we yisakhamuzi angaphandle, igama igunya indawo ye FMS, uchungechunge kanye nenani ungubani, njalo njalo.
Uyithola kanjani i-ETA isakhamuzi Uzbekistan
Njengoba ayezalelwe Uzbekistan, owafika endaweni Russian Federation, ungathola RVP iminyaka emithathu njengesibonakaliso quota esinikeziwe, futhi ngaphandle kwalo. Kumele kukhunjulwe ukuthi alikwazi ukunwetshwa.
Njengoba RVP bangene Russia? Abantu abake banqamula lo umngcele bangene e-Russia beze Migration Service Russian Federation endaweni yokuhlala ukusebenzisa. Ukuze ugweme izinkinga ezingaba khona ngenxa eniyokwazi ukunqatshelwa ETA, kangcono ukuze ujike abameli. Njengoba imvume ngeke kuhlale isikhathi eside esizayo. Isici esibaluleke kakhulu amaphepha lesifanele kuhambisana yonke imithetho eyasungulwa Russian Federation. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukufaka isicelo ETA ku-inthanethi.
Ukuze RVP kufanele uhambise imibhalo ebalwe ngenhla.
Zonke imibhalo kufanele zithunyelwe ngesiRashiya. Imibhalo ngolimi okungelona lwakubo kumelwe kuhunyushwe futhi notarized. Kuleso simo, uma imithetho engahlonishwa ukudweba ephepheni noma yakhipha isinqumo negative lokunikeza ETA, ube ngumhlali Uzbek kungenzeka sixoshwe ezweni.
RVP izakhamuzi Tajikistan
Kanjani ukuze uthole zesikhashana avumele isakhamuzi Tajikistan? Muva nje, inani elikhulu labantu abavela kwamanye amazwe eRussia, kuhlanganise kulelizwe. Uhlu kwemibhalo kuye umsuka umbaleki asishintshi, sifaka zonke iphepha efanayo abantu bakwamanye amazwe. Kodwa kuncike design base ETA kungase kudingeke iphepha lolwengetiwe, kwenta sibonelo, isitifiketi sokuqashwa, isitifiketi usendaweni cwaningo, ukuhlonza umngane womshado, nokunye.
Kanjani ukuze uthole yokuhlala imvume yesikhashana eMoscow
Uyithola kanjani i-ETA eMoscow? Ukwenza kufaka ukuqoqwa kwemibhalo kanye bagcwalise ifomu lesicelo. Izindleko namasevisi zihlobene ngokuqondile imvume zesikhashana, kuxhomeke ezicini eziningi:
iphakethe of amaphepha abalulekile eqoqwe sokubhaliswa;
isidingo ukuhumusha kwemibhalo ku Russian;
ukumangalela yisakhamuzi futhi apostilled.
Isibonelo, uma uthatha zonke izici ezingenhla, izindleko zokubhalisa kanye imvume ngoba zesikhashana eMoscow ngoba izakhamuzi zakwamanye amazwe kusuka Uzbekistan futhi Tajikistan kuyoba ruble ngamashumi amabini anamahlanu amawaka. Usizo ku ukuziphatha inqubo yokuthola ETA incike esimweni, okubandakanya:
khona ebulawa amaphepha adingekayo ngokugcwele;
kungenzeka ukuthi bathumele zonke imibhalo yawo siqu Federal Migration Izikhungo;
Ngingabakha kanjani ubuhlobo RVP e MSCs, ngabe inqubo lihlukile design kwezinye izifunda of the Russian Federation? Ukuze idokhumende lokubhalisa MSC kwamukelwa algorithm konke okwabezizwe, kodwa kubalulekile ukucabangela ukuthi zonke izinhlobo ezicashile kungenzeka ngayinye icala ngabanye. Konke kuncike kungani abafokazi isinqumo ukukhipha izibambiso ku Russian Federation ikumodi ezihambayo eRussia, futhi avela esifundeni sase-Moscow, lapho kubhaliswa kuyokwenzeka. Futhi, ukuthola RVP ezifundeni Russian namadolobha, ukubaluleka ezincane kuyinto ngokuvamile ezishibhile ukuthola idokhumenti eMoscow.
Kungani ezimeleyo efulethini ngesiRashiya?
Article 333 Code Civil we Russian Federation. Nciphisa yenhlawulo ezinkantolo
Land iziza emindenini emikhulu: amathuba amasha inkinga yezindlu izixazululo
Yezikhalazo - yesimangalo umthengi
Ukuzivikela Kudingekile ukuswela kakhulu
Utamatisi Spasskaya Tower F1: ukubuyekezwa, izincazelo, umkhiqizo
Likuphi kolwandle ehlanzeke eCrimea: izithombe kanye nokubuyekeza
Inthanethi Inkokhelo nge-credit card nge-Internet Sberbank: imfundo